လူတွေ နှုတ်ခမ်းချင်း နမ်း တဲ့အခါမှာ ဘာကြောင့် မျက်စိမှိတ်သွားရသလဲ ? - APANNPYAY
Home / ဗဟုသုတအစုံ / ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ / လူတွေ နှုတ်ခမ်းချင်း နမ်း တဲ့အခါမှာ ဘာကြောင့် မျက်စိမှိတ်သွားရသလဲ ?
လူတွေ နှုတ်ခမ်းချင်း နမ်း တဲ့အခါမှာ ဘာကြောင့် မျက်စိမှိတ်သွားရသလဲ ?
Apann Pyay 9:40 PM ဗဟုသုတအစုံ , ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ Edit
သင်နမ်းဖူးရင် သတိထားမိ ပါလိမ့်မယ် ၊ ဘာကြောင့် သင် မျက်စိ မှိတ်သွားရတယ်ဆိုတာရဲ. အဖြေက
ပညာရှင်တွေဟာ လူသားတွေရဲ. လျှို.ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့ ဒီစိတ်ကို လေ့လာခဲ့ကြပါတယ် ။ လူတွေဟာ နမ်းရှုံမှု ပြုတဲ့အခါမှာ ဦးနှောက်ဟာ မျက်လုံးကိုဖွင့်ဖို့ အလွန်ခက်ခဲစွာ အလုပ်လုပ်ရပါတယ် ။ လူသားတွေ နမ်းတဲ့အခါမှာ တကယ်တမ်း မျက်လုံးတွေ မှိတ်သွားရတဲ့ အကြောင်းအရင်းက ဦးနှောက်ဟာ အလုပ်နှစ်ခုကို တစ်ပြိုင်တည်း မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ပါပဲတဲ့ ။
စိတ်ပညာရှင်တွေဟာ ဒီလေ့လာမှုကို လူတွေနမ်းရှုံခြင်းကို လိုက်လံသုတေသန ပြုလုပ်စရာတောင် မလိုပဲ ကောက်ချက်ဆွဲနိုင်ခဲ့တာပါ။
သငျနမျးဖူးရငျ သတိထားမိ ပါလိမျ့မယျ ၊ ဘာကွောငျ့ သငျ မကျြစိ မှိတျသှားရတယျဆိုတာရဲ. အဖွကေ
ပညာရှငျတှဟော လူသားတှရေဲ. လြှို.ဝှကျဆနျးကွယျတဲ့ ဒီစိတျကို လလေ့ာခဲ့ကွပါတယျ ။ လူတှဟော နမျးရှုံမှု ပွုတဲ့အခါမှာ ဦးနှောကျဟာ မကျြလုံးကိုဖှငျ့ဖို့ အလှနျခကျခဲစှာ အလုပျလုပျရပါတယျ ။ လူသားတှေ နမျးတဲ့အခါမှာ တကယျတမျး မကျြလုံးတှေ မှိတျသှားရတဲ့ အကွောငျးအရငျးက ဦးနှောကျဟာ အလုပျနှဈခုကို တဈပွိုငျတညျး မလုပျနိုငျတဲ့အတှကျပါပဲတဲ့ ။
စိတျပညာရှငျတှဟော ဒီလလေ့ာမှုကို လူတှနေမျးရှုံခွငျးကို လိုကျလံသုတသေန ပွုလုပျစရာတောငျ မလိုပဲ ကောကျခကျြဆှဲနိုငျခဲ့တာပါ။